०.६६ प्रतिशतले घटेको नेप्से १२१०.८८ विन्दुमा, कारोबार रकममा १५ प्रतिशतको कमी | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ०.६६ प्रतिशतले घटेको नेप्से १२१०.८८ विन्दुमा, कारोबार रकममा १५ प्रतिशतको कमी
on: २५ भाद्र २०७५, सोमबार १६:४९ मुख्य खबर, लगानी
०.६६ प्रतिशतले घटेको नेप्से १२१०.८८ विन्दुमा, कारोबार रकममा १५ प्रतिशतको कमी
भदौ २५, काठमाडौं । सोमवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ । यसदिन कारोबार भएका दश समूहको परिसूचकमा उत्पादन तथा प्रशोधन र लघुवित्त समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से ८ दशमलव १० अङ्कले घटेर १ हजार २ सय १० दशमलव ८८ विन्दुमा पुगेको छ ।
उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक १ दशमलव ११ प्रतिशत र लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत बढेको छ । जसले गर्दा दिनभर ओरालो लागेको परिसूचक अन्तिम दश मिनेटमा उकालो लागेको हो ।
कारोबार भएका १ सय ६२ कम्पनीको ३ हजार ७ सय ९४ पटकको व्यापारमा ११ लाख ५९ हजार २ सय ७२ कित्ता शेयरको रू.२७ करोड ७४ लाख बराबरको कारोबार भएको हो । नेप्सेमा सर्वाधिक कारोबार हुने दश कम्पनीमा हाथवे फाइनान्सको संस्थापक तर्फको प्र्रतिकित्ता रू. १ सयमा रू.२ करोड ९८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, ग्लोवल आईएमई बैङ्कको प्रतिकित्ता रू. ३ सय ५ मा रू. २ करोड ७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यसदिन सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ९ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. ८ सय ८८ मा कारोबार भएको छ । साथै आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको शेयरमूल्य ८ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू.९ सय ६३ मा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, ग्रीन डेभलपमेण्टको शेयरमूल्य ९ दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू.१ सय १४ मा कारोबार भएको छ ।
यसदिन कारोबार भएका कम्पनीमध्ये ४० कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने ९७ कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । साथै, २५ कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ । यसदिनको कारोबार अघिल्लो दिनको कारोबारको तुलनामा १५ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ । यसदिन कारोबार रकम रू.४ करोड ९६ लाखले घटेको हो ।
बजार पूँजीकरण शून्य दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेर रू. १४ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । यसदिन ‘क’ वर्गको सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतले घटेर २ सय ५६ दशमलव १६ विन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ५३ दशमलव ५३ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव ४१ अङ्क रहेको छ । यसले बजार वियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।